चर ्चित गाइका जेनिफरको चौथो विवाह !::Jalpa Khabar
चर ्चित गाइका जेनिफरको चौथो विवाह !
Published on: ८ मंसिर २०७८, बुधबार ०१:२९
न्युयोर्क : चर्चित हलिउड गायिका एवं नायिका जेनिफर लोपेज चौथो पटक विवाह बन्धनमा बाँधिने भएकी छन्। निजी जीवनका कारण संधै चर्चामा रहने लोपेज पछिल्लो समय ‘ब्याटम्यान’ अभिनेता बेन एफ्लेकसँग डेट गरिरहेकी छन्। उनीहरूलाई धेरै पटक सार्वजनिक स्थानमा सँगै देखिएको थियो।
पछिल्लो समय ५२ वर्षीया लोपेज छिट्टै रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘म्यारी मी’को प्रमोसनमा व्यस्त छिन्। यही क्रममा उनले आफ्नो प्रेम र विवाहका बारेमा पनि बताएकी हुन्। अहिलेसम्म तीन पटक विवाह गरिसकेकी उनी चौथो विवाहको तयारीमा पनि जुटेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ‘मलाई लाग्छ म अर्को विवाह गर्न सक्छु। म विवाहपछिको खुसीमा शतप्रतिशत विश्वास गर्छु’, उनले भनेकी छन्।
उनको यही भनाइलाई आधार मानेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा लोपेज र एफ्लेक चाँडै नै विवाह बन्धन बाँधिन लागेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। जेनिफर र बेन यसअघि पनि निकट थिए। सन् २००२ मा यी दुईको सम्बन्धका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा खुबै चर्चा चलेको थियो। त्यतिबेला उनीहरूले डेट मात्रै गरेनन्, इन्गेजमेन्ट पनि गरेका थिए। तर, उनीहरूको सम्बन्ध लामो समयसम्म टिक्न सकेन। इन्गेजमेन्ट गरेको दुई वर्षपछि उनीहरू छुट्टिएका थिए। तीन जना पतिसँग पारपाचुके गरेकी जेनिफर र बेन करिब २० वर्षपछि फेरि नजिकिएका छन्। यस पटक भने उनीहरूको सम्बन्ध लामो समयसम्म टिक्ने विश्वास गरिएको छ।
जेनिफरले पहिलो विवाह सन् १९९७ मा ओजनी नोआसँग गरेकी थिइन्। तर, उनीहरूको सम्बन्ध एक वर्ष मात्रै टिकेको थियो। सन् १९९८ मा उनीहरूले सम्बन्ध बिच्छेद गरेका थिए। यसैगरी सन् २००१ मा क्रिस जुडसँग जेनिफरले विवाह गरेकी थिइन्। त्यो सम्बन्ध पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन। विवाह गरेको दुई वर्षपछि नै उनीहरू अलग भएका थिए। त्यसपछि २००४ मा मार्क एन्थोनीसँग विवाह गरेकी उनले सन् २०१४ मा सम्बन्ध टुङ्ग्याएकी थिइन्। मार्कसँगको १० वर्ष लामो सम्बन्ध टुंगिएपछि जेनिफर एकल जीवन बिताउँदै आएकी थिइन्। उनको दुई सन्तान पनि छन्।